Ny fahatsapana haptic an'ny Apple Watch dia azo ahitsy | Avy amin'ny mac aho
Ny fahatsapana haptic an'ny Apple Watch dia azo ahitsy
Hatramin'ny nanolorana azy, ny iray amin'ireo zavatra navoakan'i Apple niaraka tamin'ny firavoravoana lehibe dia ny teknolojia haptic vaovao izay Apple Watch afaka mampandre ny mpampiasa ny fidiran'ny hafatra, antso na amin'ny ankapobeny misy fampandrenesana amin'ny maody hovitrovitra.
Ity haitao vaovao ity dia tsy misy ifandraisany amin'ny hovitrovitra izay hita amin'ny fitaovana toy ny iPhone, satria raha mihady kely ao anatiny isika dia ho hitantsika fa avy ao amin'ny moto kely io no misy io famindra io kapila asymméric izay rehefa miodina dia miteraka hovitrovitra.
Amin'ny raharahan'ny Apple Watch dia mampiasa foibe ferromagnetika izay mihetsika izy arakaraka ny onja izay tantaniny amin'ny coil izay ananany manodidina azy. Eny, ny zava-misy dia ny fihotsahan'ny tany amin'izany malefaka be ny atiny ka mahatsapa fa manohina ny hoditry ny tananao ny rantsantanana.
Na izany aza, ny hoditry ny tsirairay dia tsy manome fanoherana mitovy amin'ny hovitrovitra, ary noho izany antony izany dia mety hanelingelina ireo mpampiasa sasany io vokany haptic io. Apple dia nieritreritra ny zava-drehetra ary nandamina tao amin'ny menio ny rafitra fiasan'ny Apple Watch ny mety hifehezana ny vokany. Noho izany dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto isika:
Niditra izahay Fikirana ary mivezivezy izahay mandra-pahatongantsika any amin'ilay faritra Feo sy hovitrovitra.
Izahay izao dia mamadika ny satro-boninahitry ny famantaranandro mba hidina ary hahatratra ny slider izay ahafahanao manitsy ny haptic hamafiny.
Marihina fa maro ny fiasan'ny Apple Watch azontsika ovaina avy amin'ny fampiharana Apple Watch amin'ny iPhone. Mba hanaovana izany, ny dingana tokony harahinao amin'ity indray mitoraka ity dia:
Ampidiro ny app Apple Watch ary kitiho ny kiheba Apple watch.
Tsy maintsy tsindrio ny takelaka famatrehako ary avy eo dia tokony tsindrio ianao Feo sy hovitrovitra.
Farany, amboary ilay slider toy ny fanaonao amin'ny Apple Watch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny fahatsapana haptic an'ny Apple Watch dia azo ahitsy
Eny tokoa, ny Apple Watch dia manana kristaly safira tena matanjaka
Pixelmator dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanan'ny Force Touch